Hamoaka ny voka-pifidianana loholona ny HCC | NewsMada
Hamoaka ny voka-pifidianana loholona ny HCC
Tsy ho ela intsony ? « Ezahina hovitaina amin’ny faran’ny herinandro izao ny fijerena sy fikirakirana ireo fitoriana sy fitarainana miisa 10 voaranay », hoy ny filohan’ny HCC, Rakotoarisoa Jean-Eric, omaly tetsy Ambohidahy. Midika izany fa mety hambaran’izy ireo mialoha ny asabotsy izao ny voka-pifidianana loholona natao ny 29 desambra teo, rehefa avy namoaka ny azy, 15 andro mialoha izao, ny Ceni.
Nambarany fa tsy niandry ny fitoriana ny eny Ambohidahy fa efa nijery koa ireo tsy nety tamin’iny fifidianana iny. « Efa nahazo ny antontan-taratsy izahay ary nijery raha niseho na tsy nisy ny olana... », hoy ihany izy.
Nanteriny fa niompana amin’ny fitakiana fanafoanana voka-pifidianana na koa fanintsanana kandidà ny ankamaroan’ireo fitoriana. « Hita koa anefa ireo fitarainana momba ny tsindry samihafa na koa ny kolikoly », hoy ny filohan’ny HCC.